Tungamira Dhiraivha Auto Belay | Yakakwana Yekukwira Kukwira Masystem
Bhalisa Chombo Chako
Bhalisa mudziyo wako
Nezve Auto Belays
Sevhisi & Kuberekwazve
Tungamira Dhiraivha Auto Belay
Yakakwana Descent Auto Belays maoko akavakwa muU.SA uye anosarudzika pasirese nevanokwira uye varidzi vemajimu zvakafanana. SeMutungamiriri Wepamutemo Auto Belay Mutengesi weInternational Federation of Sport Kukwira, Zvakakwana Descents zvinoshandiswa mumakwikwi eWorld Cup nemakwikwi eWorld Championship. Kupa mashandiro epamusoro pamutengo wepamusoro, yedu auto belays inoenderana, yakasimba, uye bhajeti-inoshamwaridzika, ichizvirumbidza yakaderera mutengo wevaridzi pamusika. Yakakwana Descents yakanakira kukwira dombo nzvimbo dzekurovera, kukwira misasa masvingo, kuyunivhesiti nzvimbo dzekutandarira, ninja zvipingamupinyi makosi, nzvimbo dzekuvaraidza, kudzidziswa kwemaindasitiri, uye nezvimwe!
Tsvaga mutengesi padyo newe
Nezve: Yakakwana Kudzika Yakananga Dhiraivha Auto Belay
Iyo Direct Drive ™ Auto Belay kubva kuPerfect Descent Kukwira Masystem inoratidzira yakavharidzirwa casing, indasitiri inotungamira mutengo, uye inoenderana EN. Iyi modhi ndiyo yakanaka auto belay mhinduro yezvikumbiro uko kumhanya isiri chinhu. Iyo Direct Drive ™ yakakwana kune nzira dzekutanga, nzvimbo dzemwana, uye zviitiko zvakarongwa. Shongedza kuvhiya kwako kushoma!
Yakakwana Yekuburuka ndiyo inotungamira mutengo mune auto belays uye inozvirumbidza yakaderera yepakati avhareji mutengo wevaridzi pamusoro peiyo hupenyu hweyuniti.
Iyo isina kureruka uye compact dhizaini inokwana kudzikisa mari yekutumira kana uchidzoka zvikamu zvefekitori mvumo sevhisi uye kugadzirisazve
Netiweki iri kukura yefekitori inogamuchirwa nzvimbo dzekushandira inoita kuti ikurumidze uye yakapusa kuchengetedza zvikamu zvako mukushandira uye pamadziro.
Unyanzvi, chengetedzo, uye hunyanzvi:
Yakakwana Yekutsika Auto Belays maoko akavakwa muColorado, USA, inoratidzira yakakwira-giredhi simbi isina simbi uye aluminium dzimba (hapana plastiki), uye haina kumbobvira yagadzirwa.
Zvemukati zvemukati zvinogadzirwa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinomira kuti zvidzokororwe kushandiswa uye zvinoda kushomeka-kwete-kwekugadzirisa.
Zvese zvishandiso zvinopinda kuburikidza neyakaomarara kuvimbiswa kwemhando pamberi pekutakura uye kusangana nematanho epasi ekuchengetedza.
Anochinja-chinja uye akasimba mudziyo pekugara:
Yakakwana Descents ndiyo yakareruka uye yakaomesesa modular auto belay pamusika, chinhu chakakosha che nyore kutakura nekukwirisa.
Iyo nyowani yakawanda-poindi yekumisikidza mubato inopa inoshanduka yekusimudza sarudzo uye yakazvimiririra ekuchengetedza maziso.
Yese mayuniti akaiswa mucherechedzo wekunakisa kuita zvese mukati mekunze.
Nyore kutsiva lanyard tora maminitsi kuti uchinje uye inogona kuitwa mumunda nemushandisi wekupedzisira.
Sarudza kubva pakureba kwetambo iyo inonyatso kusangana nezvinodiwa zvako: 28 ft, 40 ft, kana 53 ft (8.5 m, 12.2 m, kana 16.1 m).
Yakakwira mhando nylon kubhuroka inonyanya kushandisa-mushe kupfuura tambo-yakavakirwa masystem uye haizokuvadze madziro.
Iyo yakavakirwa-mukati yekupfeka chiratidzo inotora iyo yekufungidzira kunze kwekuziva kana yave nguva yekutsiva yako lanyard.
Anodized aluminium nozzle inosanganisirwa neiyo lanyard yekugara uye kuita.
Sarudza kubva pamatanho maviri-matatu, swivel carabiner sarudzo: aruminiyamu yenzvimbo dzinokanganisa kana kudzikisa huremu uye simbi alloy yekusimba. Kana sarudza iyo Dual Connection sarudzo ine swivel, nylon Y dogbone tether, uye mbiri aluminium, 3-danho rekutapa pini carabiners.
CHERECHEDZA: Mushandisi anogona kutsiva lanyards akareba aine mapfupi lanyards kuti agare akadzika ekumusoro akakwirira. Usambofa wakatsiva lanyard ipfupi neyakareba lanyard sezvo iyo unit isinga shande nemazvo. Yakareba lanyards inogona chete kuiswa neC3 Kugadzira kana inotenderwa sevhisi nzvimbo.
INOKOSHA: Yakakwana Yekuburuka Auto Belays yakagadzirirwa kudzorwa kudzikisira zvishandiso zvinoshandiswa mune yakatwasuka kukwira zviitiko uye haina kukodzera kuti ishandiswe mukusvetuka-mhando zviitiko izvo zvinogadzira kushamisika kurodha masimba. Kudzokorora kukatyamadza kwechigadzirwa kunogona kukuvadza zvemukati zvemukati, uye mune zvimwe zviitiko, zvinogona kukonzera kutadza kwechikwata. Iyo lanyard inofanirwa kugara yakaenzana kana kana yakakura pakureba kupfuura inotarisirwa kukwirira kukwirira. Masunitsi ane akawandisa lanyard kureba anogona kuona isina kukodzera lanyard spool izvo zvinogona kukonzeresa jerky kana kukurumidza kudzika. Nguva dzose sarudza lanyard iyo inonyatsoenderana neiyo inokwira kukwirira uye dzivisa kushandisa lanyard refu pamadziro mapfupi.
Kurema: 29 - 31 lbs (13.1 - 14.1 kg)
Makuriro edzimba: 16 x 9.5 x 7.5 mu (40 x 24 x 19 cm)
Lanyard Kudzorera Kumhanya: 2 ft / s (0.6 m / s)
Maximum Descent Rate: 6.6 ft / s (2 m / s)
Chidiki Chekuburuka Rate: 1.6 ft / s (0.5 m / s)
Dzimba Dzimba (s): Stainless Simbi, Aluminium, uye Acetal
Nozzle Chinyorwa (s): Anodized Aluminium
Lanyard Chinyorwa (s): 1 mu (2.5 cm) Wide Nylon Webbing
Lanyard Kuputsa Simba: 3,500 lbs (15.6 kN)
Lanyard Kureba (s): 28, 40, kana 53 ft (8.5, 12.2, kana 16.1 m)
Mushandisi Wehuremu Range: 25 - 310 lbs (11.5 - 140 kg)
ANSI / ASSE Z359.4: Zvinodiwa Zvekuchengetedza Kwekubatsira-Kununura uye Kuzvinunura MaSystem, Subsystems, uye Zvikamu.
Inoenderana ne EN341: 2011-1A / RFU PPE-R / 11.128 Shanduro 1 uye EN360: 2002. - Inoda kudzokororwa kwenguva nenguva pamwedzi gumi nembiri kana nekukurumidza sekugadzwa neMunhu Anokwanisa
AS / NZS 1891: Maindasitiri Kudonha-Kusunga MaSystem uye Midziyo - Chikamu 3: Kudonha Kusunga Midziyo
CSA Z259.2.3-99: Descent Kudzora Midziyo
Yakakwana Yekuburuka Chigadzirwa Guides
Gara kusvika Kusvika
© 2021 Yakakwana Yekukwira Kukwira Masystem. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.
Ndokumbirawo ugovane nzvimbo yako kuti uenderere mberi.
Tarisa zvedu gwara rekubatsira nokuti zvimwe info.